နားမုဒိန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » နားမုဒိန်း
Posted by ムラカミ on May 3, 2012 in Critic, Drama, Essays.. | 37 comments
ကျနော် ရွာတွင် ၂ပါတ်နေပါသည် … ၁ပါတ်တိတိ နေ့အလုပ်လုပ်
ည သူရာသောက် နှင့် ကျန်၁ပါတ်သာ ဟုတ်တိပတ်တိ အချိန်အား ရခဲ့ပါသည်..
ခြုံငုံ၍ ဘိုလိုပြောရလျင်တော့ i had good times ပေါ့ …ကျနော် ပျော်ပါသည်.။
သို့သော် ကျနော် လုံးဝ စိတ်မကျေနပ်နိုင်သော (၀ါ) စိတ်မချမ်းသာနိုင်သော
အကြောင်းချင်းရာ အချို့ ရှိနေပါသည်…။ ထိုအရာတို့ကို ခေါင်းစဉ်မျှဖော်ပြီး
၁။ အလွန်ပူသော နွေရာသီ ..(မတတ်နိုင် ..မောင်ဂီ့ စိတ်လျှော့ရုံမှတပါး အခြားမရှိ)
၂။ အလွန်နှေးသော ကော်နက်ရှင် (မတတ်နိုင် … မိမိ ဥာဏ်မီသော ကိစ္စမဟုတ်.. )
၃။ အလွန် ရှုပ်သော လမ်းဘေးဈေးသည်များ ..(အနည်းငယ်တော့ ကျွဲမြီးတိုသော်လည်း
ရှိစေတော့ ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေ ကိုယ် ဘယ်မှ မထွက်လျင် ဘာမှ ရှော့ခ်မရှိ)
၄။ ဆူညံသံများ …..(အဲ့… ဒါတော့ ပြောရမယ်ဗျ)
အနှီ ဆူညံသံတွေထဲမတော့ အဆိုးဆုံးက လော်စပီကာများပါခင်ဗျား….။
မိုးလင်းတဲ့အခါ ပဲပြုတ် ဆိုတဲ့အသံနဲ့နိုးပြီး မိုးချုပ်လို့ သန်းခေါင်စာ အီကြာကွေး ဒါမှမဟုတ်
စမူစာ သံနဲ့ အိပ်ရတာ ကြုံဖူးကြမယ်ထင့်. (ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး တစခန်းထတယ် မပြောပါနဲ့ဦးဗျို့)
အနှီ အော်ရီဂျင်နယ် လူသံ တွေ ခနထားလို့ …လော်သံတွေကို ပြောရမယ် ဆိုရင်ဖြင့်.. အဟမ်း
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ မိုးလင်းတာနဲ့ ၀တ်အသင်းကလည်း လော် . .. နယ်က ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းခံလည်း လော်
မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်း အလှူခံ ကလည်း လော် ..ထရစ်ဒစ်ရှင်နယ်လ် ထီသည်ကအစ …သွားချေးချွတ်ဆေး
အလယ် ရာသီပေါ် သစ်သီးဝလံ အဆုံး လော်ဆိုမှ လော်နေကြတော့ သကိုးဗျာ…။ ခက်တော့လည်း ခက်သေးရဲ့
ကားနဲ့လှည့်တဲ့ မိုဘိုင်းလ် အလှူခံ ကား စမ်းမလား … စတတ်တစ် အလှူခံ မဏ္ဍပ် စမ်းမလား အိုဘယ့်
လော်ဆိုမှလော် လော် အော်ပုံ အော်နည်း နိဿရည်း ဘယ်နှစား ရှိသလဲတော့ မောင်ဂီ့ မသိ… မောင်ဂီ့သိတာကတော့
အလှူခံ ဆိုပါက ပါဠိ တွေ ရွတ်မယ်ဗျာ ..ဈေးရောင်းတဲ့ လော်တွေကတော့ နဘေတွေ ထပ်မယ်…ကျုပ်တို့မှာတော့
နားတွေကို ညည်းလို့ ….အဲ့… မရွတ်ဘူးနော်… ရသေးတယ်… ပဌာန်း တွေ တရားပွဲ ခွေတွေ သီချင်းတွေ နားဆင်ဖို့သာ
ပြင်ထားပေတော့ ဗျို့ …ပျံလွန်တော်မူပြီးသား ဆရာတော်ဘုရားကြီးများက အစ ရွာအကြိုက် ရပ်ပါလေးတွေ အလည်
အိုင်လပ်ဗ် သည်ဝေး ယူလိုင်း အဆုံး ကြားရဖို့ ပြင်ထား …။
စတီရီယို အဆိုကျော်ကြီး တယောက်ရဲ့ တေးသီချင်း ခေါင်းစဉ်လေးပါ … သင်၏နားကို ခဏငှားပါတဲ့…
အလဲ့ ယဉ်ထှာ အေ…။ခုတော့ ကျုပ်တို့ အမှန်အကန် နားမုဒိန်းကျင့် ခံနေရပါပကောလား …။
ရေရေလည်လည် ကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်တဲ့ လူကြီးတွေ များပြောပါတယ်… သီချင်းသံကြားရင် ခေတ်လူငယ်တွေ
တယ်ရိုင်းသကိုး ..ဘာညာ လုပ်တတ်ကြရဲ့… ဂျစ်ဂျစ်ဂျစ်ဂျစ်.. ရှဲ ရှဲရှဲရှဲ တွေ တပုံတခေါင်းပါတဲ့ တရားခွေတွေ
ဟိုဘက်အိမ် ထိပ်ကလော်က ထွက်လာတော့ သူတို့ချည်း လေသံကြား ဖမ်း သာဓုကြတယ်…။
ကျုပ်သိတာကတော့ ဒက်စီဘယ် ဘယ်လောက်ကျော်ရင် ဘာသံဖြစ်ဖြစ် noise က noise ပါပဲ ဆိုလား…။
(သိတယ်… သိတယ်…၀ိုင်းဆဲကြတော့မယ်… )
ပြောချင်တာ သည်လိုလေးရယ်ပါဗျာ.. ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ကြ ဆိုတဲ့ စကားကို ဖြည့်ရရင် …
တနေ့သေကြရမည် မသေခင် လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြ ဒါပေသိ ..သူများ မထိခိုက်စေနဲ့ ဆိုတာ လေး ရယ်ပါ…။
တရားသံမှ သီချင်းသံမှ …စီးပွားရေး ကွ ဆိုတာလေး ဘေးချိတ်လို့ ပြောရရင်ဖြင့်….။
အလိုဗျာ city never sleeps တဲ့ …နေ့ဆိုင်း ညဆိုင်း အလုပ်လုပ်သူတွေ ရှိမယ်…(ကားဆြာတွေ နာ့စ်တွေ ဆြာဝန်
တွေပြောပါတယ်.. တခြား ညဆိုင်းသမားတွေတော့ သများ မသိ…) ကိုယ့်အိပ်ချိန် လာဆူနေရင်တော့
ဘာသံဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမှ နှစ်သက်မယ်မထင်…။ နေထိုင်မကောင်းတဲ့လူ ရှိမယ်…။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရှိမယ်…။
အလွန်ငယ်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ ရှိမယ်…။ နားအေးပါးအေး နေချင်တဲ့လူရှိမယ်..။
ကိုယ့် ကာလချာ နဲ့ ကွဲပြားမယ့် ဘာသာခြား လူမျိုးခြား တွေရှိမယ်..
ကောင်းတာလုပ်တာပဲ ဆိုဦးတော့ ..လော် ကာလချာ ကိုတော့ ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်ဗျာ…။
အသံညစ်ညမ်းမှု ဆိုတာ ရှိတယ်ဗျို့ …။ ပူရတဲ့အထဲဗျာ… ကျောပူတာထက် နားပူတာက ဘာပြုတယ်ဆိုတာ လေး..
လော်သံ အပြင် ဆက်ရလျင်တော့ …
လူနေရပ်ကွက်ထဲက ဆောက်လက်စ တိုက်တွေမှာ မဆလာဖျော်တာ ..သံပန်း ဂဟေတို့တာ …ကျောက်ပြားဖြတ်တာ..။
ဒီဆြာတွေလည်း ဆင်ခြင်စေချင်တယ်ဗျို့ …တကယ်ပါ… ဘာမှ မဖြစ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်သေးတာ …
အဲ့ …ဖြစ်တော့လည်း….. ဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာ ..ဘရိတ်ကာလေးတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်သာ
တကယ်ပါ …၂၂၀၀ပ် မှာ ကျုပ်က ပါဝါမီတာ သမားမို့ ကျုပ် မထိခိုက်ပေမယ့် …အိမ်သုံးမီတာသာ
တပ်ထားသူတွေ ရဲ့ အိမ်မှာတီဗီဖြစ်ရတာ .ကွန်ပူတာဖြစ်ရတာ အဲကွမ်းဖြစ်ရတာ….အနှီ စက်ကလေးတွေ
ကိုဖြင့် ..ကျုပ်တော့ လွှတ်သနားသဗျာ…ဆေ့ဗ်ဂတ်လေးတွေ အေဗီအာရ်လေးတွေ ဘယ်လောက်တောင်
ရုန်းရရှာတယ်ဆိုတာလေး … အိမ်တွင်းစက်မှု လုပ်ငန်း ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ လုပ်ကြသူတွေရဲ့ ဆူညံသံနဲ့တကွ
မီးအားအတက်အကျမှာ ပစ်လိုက်ရတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ပေါခဲ့တဲ့ ..ကျနော့် …ငယ်ဘွကို ပြန်မြင်ယောင်မိပါရဲ့…
နောက်တမျိုးက မည်သို့မည်ပုံ ချမ်းသာလာသည်မသိ…။ ကားတွေဝယ် ..ပြီး …ထားစရာ ဂိုထောင်မရှိ ခြံမရှိ …
(အလကားပါ …ရှိလည်း တိုက်ဆောက် လူတင် ငှားစား အဟတ်…) ပြီး ကားတွေ လမ်းပေါ်တင်…
ကားသူခိုးရန်က ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ..ခွေးဝဲစားလေးတွေ စားမကုန်တာလေးတွေချကျွေး .. ငွေမကုန် အလှမပျက်
ချွေးမထွက်ဘဲ အစောင့်လေးတွေရ …အဲ့ ..(ချစ်လှစွာသော ရှီဇူးလေးများကိုတော့ အိမ်ထဲ ခြံထဲမှာပဲ ..မွေးမပေါ့နော..
ခွေးသူခိုး ရန်ကလည်း ကြောက်ရပါသဘိ…)
ဆိုတော့ သူဌေးအိမ်က အကျန်စား ခွေးဝဲစားများက လမ်းတကာလှည့် ခွေးဂိုဏ်းထောင် နယ်မြေလု ကိုက်ကြခဲကြ
ဟောင်ကြ အူကြ …ညညဆိုဗျာ … မပြောချင်ဘူး ..
စည်ပင်ခေါ် အမဲတုံးပစ်တော့… သတ္တ၀ါတွေကို သတ်ခိုင်းတာတဲ့ ပါဏာတိပါတာ တဲ့ …
သူရို့ကျတော့ .. သတ္တ၀ါလေးတွေကို သနားသဖြင့် ကျွေးမွေး ထားတဲ့အတွက် သေရင်ပက်လက်
နတ်ပြည်တက်မတဲ့လေ…. ။ ကျုပ်တို့ နားတွေ ခွေးဝဲစား မုဒိန်းကျင့်တာလည်းခံရသေး. .. ကိုယ့်အိမ်ကို သိုင်းကွက်နင်း
ပြန်ရင်တောင် ဒင်းတို့ ၀ိုင်းခဲမှာကြောက်ရသေး…။ အဲ့ …ကျုပ်တို့ထားပါဦး ..အမှိုက်ကောက်တဲ့ ချာတိတ်လေးတွေ
အကိုက်ခံရတာတို့ ကလေးငယ်တွေအတွက် အသက် အန္တရာယ် ချိန်းခြောက်နိုင်တဲ့ ခွေးရူးရောဂါ ပျံ့ပွားရေး
ချန်နယ်တခု ဖြစ်နေစေတာတို့ ကို ကျတော့ ..အနှီ သာထိန်းမင်းတွေဘယ်လို တာဝန်ယူဂျမဲ ဟင်င်င်င်..။
ဆက်ပြောရင်လည်း …. ရှင်က ဟိုလူဂျီးလိုပဲ ဘာဖစ်တယ် ညာဖစ်တယ် ပြောဦးမှာ စိုးလို့ ခွေးကိစ္စတော့ တော်သေးဘီဗျာ…..
(အာဟိ….အသည်းမမာတဲ့ ကျုပ်ပါဗျာ …ဂယ် ….)
ကဲပါ. .အချုပ်ပဲ ပြောပါတော့မယ် … လော် အပါအ၀င် လူနေအိမ် ပါတ်ချာလည်မှာ စည်းပွားရှာတဲ့ ကိုယ့်ဆြာတွေရော…
ခွေးဝဲစား ဂိုဏ်း ထောက်ခံသူတွေကိုပါ. … ပြောပါရစေ ကိုယ့်ဆြာတို့ …
ပြောတော့ ..ကိုယ့်ဆြာတို့ အားလုံး လိုချင်တာ … ဒီ .. ဆို …
ဒီ ဆိုတာ တောင်းယူရမှာ မဟုတ်ဘူး ဆို… ကျင့်ကြံယူကြမှ ရမှာ ဆို….။ စည်းကမ်း ရှိကြမယ် ဆို ဆို …. ဆို ….
has written 498 post in this Website..
今でしょ？ CJ # 9092011
View all posts by ムラカミ →
char too lan says:
မတော်နဲ့ ပြောတာကောင်းတယ် ဆက်ပြော….
နာလဲထောက်ခံတယ် အိပ်ရတာက အစောဆုံး မနက်၁နာရီ နေတာက တာမွေအ၀ိုင်း လူသိတဲ့အတိုင်း မွတ်စလင်ဘုရားကျောင်းနောက် မနက် ငါးနာရီကစကြားရတဲ့စွဲစွဲငင်ငင်အော်မည်သံနှင့် လော် ….
မယ်သီလျှံ အလှူခံတဲ့ ၆နာရီခွဲ လော် ….
နာ့ဒုက္ခက ငါးနှစ်သားလောက်ကတည်းကကြားရတဲ့ အဲ့ဒီအသံ… သေခါနီးအထိနားယဉ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
နေ့တိုင်း ၅နာရီ လန့်လန့်နိုးတယ်ကွာ………….. နာ့ကိုဂ အကျင့်မကောင်းတာ
ဥပုသ်လ ဆိုရင် ည ၆နာရီ လော်….. ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။
ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့ အိမ် ဆိုရင် ဗလီ ၃ခု ကြားမှာ နေခဲ့ ရတယ်။
၂ခုကတော့ အော်တယ် ၁ခု ကတော့ ဘာလို့လဲ မသိဘူး အသံ သိပ်မထွက်ဘူး။
မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံက စည်းမရှိကမ်းမရှိအော်ဟစ်နေတဲ့အသံတွေဟာ ဓမ္မသံမို့သည်းခံပေမယ့် တကယ်တော့ ဓမ္မသံက အဓမ္မသံဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာပါပြီ…
ဘီယာဆိုင်ဘေးမှာ လော်စပီကာနဲ့ တရားခွေလာရောင်းတာတမျိုး၊ ထီသည်အကြီး၊ အသေး၊ အလတ်တို့ရဲ့ ကော်ပီသီချင်းကြော်ငြာများသည်တစ်ဖုံနဲ့နေလာရတာလဲများတော့ သိပ်တော့မထူးပါဘူး
ဒါပေသည့် ဟိုအရင်တုန်းက အသံချဲ့စက်ဥပဒေဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကြားဖူးပါတယ်…
ပြောသာပြောရ… စကားသာ အဖတ်တင်တယ်…ဟဲ့..ဟယ်..ကိုယ့်အမျိုး အတွက်ရယ်မို့တကယ်…
ဟီး..ဟီး.. ငယ်ငယ်တုံးက ကြားဖူးတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လေ တွံတေးသိန်းတန်ထင်တယ်…
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ရွာထဲမှာ ကြောင်ဂိုဏ်း ရှိလို့ ခွေးဂိုဏ်း အကြောင်း လာပြောပြီး ရန်တိုက်ပေးတာလား။ အဟိ.. ပြေးပြီနော်.. ၀ှစ်..၀ှစ်.. ၀ှစ်…..
ဒက်ဆီဘယ် ဘယ်လောက်ကျော်ရင်တော့မသိရိုးအမှန်ဗျ…တစ်ခုတော့ရှိတယ် (တစ်ယောက်တစ်ဝက်စားမယ် တော့မပြောနဲ့နော်)… ရန်ကုန်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာနယ်နမိတ်အတွင်းမှာ လော်စပီကာလုံးဝမသုံးရဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေထုတ်ထားတာကြာပြီဗျ။ ကျွန်တော့်အထင် 8 နှစ်လောက်ရှိပြီ။ ဒါပေမဲ့ ထိထိရောက်ရောက်အရေးမယူတော့ ဘယ်သူမှအလေးမထားပဲ ဆက်သုံးနေကြတာလိုထင်ပါတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး ပဌာန်းပွဲတွေဘာတွေမှာတောင် (လုံးဝ)မသုံးရဘူးဗျ။ သုံးချင်ရင် ရပ်ကွက်ရုံးကို စာတင်ရတယ်။ ဘာကြောင့်သိလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က ရပ်ကွက်ထဲက ဓမ္မာရုံမှာနှစ်စဉ်လုပ်တဲ့ ပဌာန်းပွဲမှာ နှစ်တိုင်း ပါလေရာ ယောင်ဝေဝေ ဝင်လုပ်နေဖြစ်လို့ပါ။ အဲ့လော်ကို မသုံးစေချင်ဘူးဗျာ။ ဘယ့်နှယ့်…ဒင်းက တော်တော်ဝေးဝေးထိကိုပြေးတာကိုးဗျ။ အလဲ့…တစ်ချို့များ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖွင့်ဖို့ မောင်မောင်ထွန်းတို့ ဒေါ်ကြင်ကြင်တို့မှာ လော်ဝယ်တာတွေ့မိဘာတယ်..ဘာတဲ့…5ရွာကျော်တဲ့ ယူနစ်ပေးပါတဲ့။5ရွာကျော်ဆိုတာ တောတွေမှာ ဒီရွာကဖွင့်လိုက်ရင် အဲ့ဒိဖွင့်ထားတဲ့ရွာရဲ့5ရွာကနေတာင်ကြားရတဲ့ဟွန်းကိုပြောတာဗျို့။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကတော့ ဝပ်များတာကိုမပြောတတ်တာနဲ့တူသဗျ။
နယ်ဘက်မှာ မဲဆွယ် ထွက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဲဒီ သတင်းကြားမိတယ်။
လော်.. ဖွင့်ခွင့် လက်မှတ်ပါလား ဆိုပြီး မပါရင် မရဘူး ဆိုပြီး ကြားမိတယ်။
ဒီအသံတွေ Noise Pollution က ပိုဆိုးနေတယ်။တီချာတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ
ကိုမိုက်ခဲတွေ မိုက်ကိုင်စွဲပြီး ချွဲခတ်သံတွေ၊ ဘုန်းကြီးမဟောခင် နေ့ခင်းကတည်းက
ဟောနေတဲ့ အရပ်ထဲက ၁၀၉။၁၁၀ တွေ၊ အောင်ပွဲဆိုပြီး လမ်းပိတ်ပြီးတရားပွဲ
ဆယ့်လေးငါးရက်ကျင်းပနေကြတာတွေ၊ ကြာရင် ငါ့ သွေးတိုးလေး ပါဝါတက်တော့မယ်။:(
ဘယ်သူဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ လို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေးဖူးတယ်။ ဗုံးကြဲမှရတော့မယ်။
တီချာကြီးဗုံးကြဲမယ်ဆိုဗိုက်ကလေး ကိုခေါ်လိုက်မယ် သူကအိပ်စပတ် (အခုတလောငြိမ်နေတယ်)
ကိုရင်ဂီ..နင်က၀တ်ကျွတ်တော့မှာပါ…နင်ကငရဲကို အလည်လာတဲ့ လူပါ
ဒို့ကတော့ ..ဒို့ကတော့…ပြောရရင် ငရဲ တစ်သက်တကျွန်းကျနေကြတာဟ..
ဟင် ကိုယ့်ပြည်ကို ချစ်ရမယ် ဘယ်နှယ့် ငရဲလည်းကိုကြီးမိုက်
ကျုပ်ကတော့ ကိုဂီကိုမေးထားတယ် ဂျပန်မှာ အလုပ်ပေါလားလို့
တတ်တဲ့ ပညာကလည်းမရှိတော့ အင်း မိတ်ကပ်ပြင် အလုပ်ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။
လူတွေက လိုချင်တာက ဒီပါ
ဂီတို့ ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။
Khin Latt says:
ဟဲ့ မောင်ဂီ – ဆေးလိတ်တွေ သောက်လှချည်လား။ မင်းနှယ်ကွယ်။ ဒီ အရွယ်လေးနဲ့၊ လျှော့ သောက်မှပေါ့။
ဟဲ့ မောင်ဂီ – ဘယ်ကြွမြန်း ဦးမှာလဲ။ “ဘီဘီ” ဆီ ကိုလား။ ဟင်း – မပြောချင်ဘူး။ တစ်ချိန်လုံး အဲဒီကို ဘဲ မျက်စောင်းထိုးနေ။
ဟဲ့ မောင်ဂီ – ဒီ ကွန်ပျူတာ နဲ့ အိပ်ရာဝင် ပြီးတော့ အဲဒါနဲ့ မျက်နှာသစ်။ ဒါကြောင့် ပါဝါ အားကြီးကြီးလာတာ။ ကိုယ့်မျက်လုံးလေးများ နားပါစေဦး။
ဟဲ့ မောင်ဂီ – ဒီ ပြောင်း ကြီး ကို ထုတ်ပြန်ပြီ။ မြင်မြင် ကရာ လျှောက်ချိန် နေတော့တာဘဲ။ နောက်ဆို မင်းမြင်တာနဲ့ လူတွေ ထွက်ပြေးမယ်။
ဟဲ့ မောင်ဂီ – ………………………………………
ဟဲ့ မောင်ဂီ – :D :D :D :D :D :D :D :D :D
မုဒိန်းမှု ပိုပြီး အထမြောက် သွားအောင်လို့။ ;-)
တခြားမှာတော့ မသိဘူး (တကယ်မသိတာ..)
မြန်မာပြည်မှာတော့ စည်းကမ်းကို/ကျင့်ဝတ်ကို ကိုယ့်အသိတရားနဲ့ကိုယ် စောင့်ထိန်းမယ့်သူ အင်မတန်နဲတယ်။
ဒီတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ စည်းကမ်းရှိစေချင်ရင်တော့
မလိုက်နာရင် – မည်သူ့ကိုမဆို
(အမှန်တကယ် မည်သူ့ကိုမဆို။ စစ်သားအပါအ၀င်၊ ရဲအပါအ၀င်၊ ထောက်လှမ်းရေးအပါအ၀င်၊ အင်ဖေါ်မာအပါအ၀င်၊ ဗွီအိုင်ပီ အပါအ၀င်၊ လူကြီးသားသမီးအပါအ၀င်၊ သူဌေးကြီးများအပါအ၀င်၊ သူဌေးကြီးများမွေးထားတဲ့ လက်စွဲတော်များအပါအ၀င်၊ ဆယ်လီဗြစ်တီတွေအပါအ၀င်၊ ဂုဏ်သရေရှိမျက်နှာကြီးတွေအပါအ၀င်၊ ဘာသာအားလုံးရဲ့ ဘုန်းကြီး၊ သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဗလီဆရာ၊ နတ်ဆရာတွေအပါအ၀င်- လူကမွေးသမျှ အားလုံး အားလုံး)
စည်းကမ်းဥပဒေအတိုင်း တိတိကျကျ အရေးယူရပါမယ်။
လူက မွေးသမျှ အားလုံး ဆိုလို.. နားငြီးခံရတဲ့ အထဲမှာ အိမ်ခေါင်းရင်း သစ်ပင်က စာကလေး တသိုက်က မနက် မိုးတောင် မလင်းသေးဘူး အော်ဟစ် ဆူပူနေကြပြီ။
ညနေစောင်း ၅နာရီ ၆နာရီ လောက်အထိ ဆူညံနေကြတာ တနေလုံး အောင့်ထားသမျှ အခုမှ အတိုးချ စကားပြောသလား အောင့်မေ့ရတယ်။
စည်ပင် အပိုင် ဖြစ်နေလို့ သစ်ပင် သွားခုတ်လို့တော့ မရဘူး။
သတ္တ၀ါတွေ ဆူတယ်သာ ပြောတယ်..လူတွေ ကလည်းလူတွေပဲလေ.သူတို့နေရာ တွေကိုအပိုင်သိမ်းချင်နေသကိုးဗျ..
သဘာဝ ကိုတော့ တားမရပါဘူးဗျာ..အဲဒီတော့ အပြစ်မမြင်ဘဲ အချစ်ဝင်လာချင်ရင်..
ဦးစိန်သော့လို..အစာလေးကျွေးပြီး အိမ်လေးဆောက်ပေးထားလိုက်..ဒါဆို အေးဆေး
ဆူး ဆိုလိုတာ.. လူတွေ လုပ်မှ ဆူညံသံ မဟုတ်ပါဘူး။
လူမလုပ်လည်း ကိုယ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ရှိသင့်သလောက် ရှိတာမို့.. ရွှေတိုက်စိုး ပြောသလိုပဲ နေရတဲ့ ဘ၀ နဲ့ နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အချိုးတကျ ခံစားနေထိုင်တတ်နေပါပြီ။
ဆူး နေထိုင်တဲ့ နေရာက ရပ်ကွက်နဲ့ ကပ်နေတော့ အမှန်ဆို.. နေ့ခင်းကြောင်တောင် အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး မောင်း တီးတဲ့ သူက တီးတာပဲ.. ဘာအတွက်လဲတော့ မသိဘူး.. အဲဒီ မိန်းမကြီးကို မောင်းကြီးလို့ နာမည် ပေးထားတယ်။ သူကလည်း ရာသီအချိန်နဲ့ တီးတယ် ထင်တယ်။ တီးတယ်ဆို ဆက်တိုက် တီးပြိး မတီးဘူးဆို လုံးဝ မတီးပါဘူး။
ရပ်ကွက်ဆိုတော့ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ လူတွေ ပြောဆိုနေတာတွေ ဈေးသည်တွေ အသံတွေ ဆူညံနေတတ်သလို တခါတလေ ရန်ဖြစ်တဲ့ အသံတွေ ထမိန်ခါးတောင်းကြိုက်ပြီး နဘန်းလုံးတာတွေ တခါတလေ တယောက်နဲ့ တယောက် ဓါးတချောင်းကိုင်ပြီး ကျိန်းနေတာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ တော်တော် ဆိုးပါတယ်။ နေရတဲ့ ဘ၀ နဲ့ နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကို လိုက်လျောညီထွေ နေရတာမို့ အသားကျလို့ နေတတ်နေပါပြီ။ အခုမှ လာတဲ့ သူမို့ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင်တော့ မကြာခင် ပြန်တော်မူမှာ ဆိုတော့ ခဏတာ သဘာဝ အလှလို့ မြင်လိုက်ရင် တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
တူက နဘတ်ယောက်ရာပီး နားမဒိန်ကျင့်ထံ ရသရေးဘာရေးနဲ့ ဟော့မာ နစ်ရေးဆယ်ကော် …….. နရယ် ထံ နေရတာ မတနားဘူးလား
Shwe Tike Soe says:
ဟုတ်ပ ကိုဂီရေ ခင်ဗျားပြောလဲပြောချင်စရာပါပဲ… ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ဂျပန်မှာအနေကြာတော့ ဘယ်ခံနိုင်ရည်ရှိမလဲဗျာ…. ကျွန်တော်တို.တော့ ကိုမျိုးချစ်တွေပီပီ (စကားကြီးစကားကျယ်) ဟိဟိ နားမုဒိန်းကျင့်လဲ ခံနိုင်ရည်ရှိသွားပြီဗျာ…. ကိုယ်က သွားပြောလို.မှမရတာ.. ခန္ဒီစ သီခံခြင်းသာ လက်ကိုင်ထားရတာပါပဲဗျာ….
ဒါနဲ. နားမုဒိန်းမှု နဲ. ဒီ ရခြင်တာ နဲ. ဘာမှမဆိုင်သလိုများဖြစ်နေသလားလို… အင်း ကျုပ်ကပဲ ဥာဏ်မမှီလို.ထင်ပါတယ်…..
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ၊ ပြီးတော့ ဆင်းရဲကလဲ ဆင်းရဲသေး အဲဒီတော့ အလှူခံပြီး သာသနာကို ထိန်းသိမ်းနေရတာလေ… ဓမ္မာရုံက လော်စပီကာနဲ. ဆွမ်းချက်ကြဖို. နှိုးဆော်တာကို နားညီးတယ်ဆိုပြီး ပြန်အိပ်လို.ကတော့ ကျုပ်တို.နိုင်ငံက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဆွမ်းငတ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဗျာ..
ဈေးသယ်တွေ မနက် ဈေးရောင်း တာ လော်စပီကာလေးနဲ.အော်ရောင်းလို. ခင်ဗျားတို.နိုးပြီး မနက်စားစားနေရတာကိုေ၇ာ …. အသံတိတ်ရောင်းလို.ကတော့ သူလာတာတောင်မသိတဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေ အိမ်ရှေ. တိတ်တိတ်ကလေး အိမ်ရှင်နိုးတဲ့အထိ ထိုင်စောင့်ရောင်းရမလိုဖြစ်နေပါပေါ့လားဗျာ… (ကျုပ်တို.နိုင်ငံ အဲလောက် မာရေကျောရေ ဈေးမရောင်းနိုင်သေးတဲ့ ဆင်းရဲသားနိုင်ငံပါဗျာ….)
ခင်ဗျားတို. အလယ်အလတ်နဲ. အထက်တန်းစားတွေ နားမုဒိန်းကျင့်မခံရအောင် ဈေးသယ်၊အလှူခံ၊ဓမ္မာရုံတွေ၊ တရားပွဲ၊ ဝေယျာဝစ္စအသင်းတွေ အားလုံး အသံတိတ် လုပ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ
တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်…. အဲလိုနားမုဒိန်းကျင့်မခံချင်ရင်တော့ တောထွက်တော့ဗျို. ဒါတောင် ငှက်သံ၊ရေသန်၊သစ်ပင်သစ်ရွက်လေတိုးသံ တွေက နားမုဒိန်းကျင့်ကြအုံးမယ်နော်….
မှားတာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါ… ပြောပါရစေတော့ :D
zaw min says:
ကျုပ်တို့ဒီရွာထဲမှာတောင် လူသစ်လူဟောင်းဘယ်သူများ စည်းကမ်းတိုင်းလိုက်နာကြပါသလဲ…
လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်..ဒါတွေကိုသူကြီးက လွှတ်လပ်စွာအမြင်ကွဲကြပါစေဆိုရင် ….
ဓမ္မာရုံက လော်ကတော့ အဆိုးဆုံးထင်ပါတယ် … ကျန်တဲ့ဈေးသည်တွေက သီးခံပေးလို့ရသေးတယ် … လော်သံကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ကြောင်း ပြောမိရင် လူကြီးတွေက မကြိုက်ကြဘူး … သူများကုသိုလ်ယူနေတာကို မငြူစူရဘူးတဲ့ .. ဘာပဲပြောပြော အိပ်ပျက်ရင်တော့ စိတ်တိုတာပဲ …
ကျုပ်မကြိုက်တာ ၊ ဘယ်.နယ် ကုသိုလ်ရေးဆိုပြီး အခွင်.ရေးယူနေကြတာ။
ပြောပြန်ရင်လည်း ငရဲကြီးမှာကြောက်ရသေး (လူကြီးတွေခြောက်ထား၍) ။
ကထိန်ရာသီရောက်ရင်လည်း ကျုပ်မှာ တစ်လလုံး လော်ဒဏ်ခံနေရတာ …ဒါပေမဲ. တောသူတောင်သား
တွေကတော. ဒီလော်ကိုသိပ်ကြိုက် ။ ဘာဒဲ. ….မိန်းမသွားတောင်းရင်တောင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော. ..
” လော်မပါရင် ….တော် …မလာခဲ.နဲ. …တဲ.”
နယူယောက်က.. နားမုဒိမ်းကာကွယ်တဲ့.. လုပ်ထုံးတချို့တင်ပေးလိုက်တယ်..
ရန်ကုန်မှာလည်း.. မုဒိမ်းကောင်တွေ အရေးယူနိုင်တဲ့.. လုပ်ထုံးပြဌာန်းပြိး သေသေချာချာကိုင်တွယ်သင့်တယ်..
အထူးသဖြင့်.. ဘာသာေ၇းအကာအကွယ် ယူထားသူတွေကိုပေါ့..။
NEW YORK CITY NOISE CODE
The New York City Noise Code balances the important reputation of
New York asavibrant, world-class city that never sleeps, with the
needs of those who live in, work in, and visit the city. In 2007 the City
updated the Noise Code for the first time in 30 years to reflect the
changing landscape and advances in acoustic technology.
Simply put, the Noise Code was created to reduce:
“The making, creation or maintenance of excessive and unreasonable
and prohibited noises within the city affects and isamenace to public
health, comfort, convenience, safety, welfare and the prosperity of the
people of the city.”
In order to enforce this objective, the New York City Department
of Environmental Protection (DEP) and the New York City Police
Department (NYPD) share duties based on the type of noise
complaint. To reportanoise complaint, call 311 and they will direct
your grievance to the appropriate agency.
This booklet is designed to provide an overview of the Noise Code
and some of the most common sounds of the city. For more detailed
information about noise in the city and the law itself, please visit:
http://www.nyc.gov/dep and follow DEP at http://www.facebook.com/nycwater.
The decibel (dB) is the universal unit of sound measurement and is
measured withameter that registers sound pressure and displays
these readings onasound level scale. Decibels arealogarithmic unit,
which means thatanoise measuring 30 decibels is actually 10 times
louder thananoise registering at 20 decibels.
One challenge of measuring sound in the city is that there isahigh
level of ambient sound, or background noise in an area. For example,
Times Square has high ambient sound levels, making it harder to
distinguish the source ofasound. The same sound inaresidential
neighborhood may be easier to measure because there is less
Call 311 to reportanoise complaint
Sound levels vary depending on one’s distance from the noise source.
Below are some frequently heard sounds and their approximate
decibel levels at common distances from the noise source. When
designated as “dB(A),” as seen below, the measurement is weighted in
the “A” scale to simulate human hearing.
Whisper ………………………………………………….. 30 dB(A)
Normal Conversation/Laughter ………………….. 50 – 65 dB(A)
Vacuum Cleaner at 10 feet ………………………… 70 dB(A)
Washing Machine/Dishwasher …………………… 78 dB(A)
Midtown Manhattan Traffic Noise ………………. 70 – 85 dB(A)
Motorcycle ……………………………………………… 88 dB(A)
Lawnmower ……………………………………………. 85 – 90 dB(A)
Train ………………………………………………………. 100 dB(A)
Jackhammer/Power Saw ………………………….. 110 dB(A)
Thunderclap ……………………………………………. 120 dB(A)
Stereo/Boom Box ……………………………………. 110 – 120 dB(A)
Nearby Jet Takeoff …………………………………… 130 dB(A)
“နားမုဒိန်း”တဲ့ အတော်အလင်္ကာမြောက်တဲ့ အသုံးပါဘဲ။
ဂီက သေးသေးလေး တစ်ခုထဲဖော်ပြလိုက်တာ .. မုဒိမ်းပေါင်းမြောက်များစွာခံနေကြရတာပါ .. အဲ ဆိုးတာက အများစု က သူတို့ မုဒီမ်း လုပ်မိနေမှန်း မသိသလို အလုပ်ခံနေရသူအများစုကလည်း အလုပ်ခံနေရမှန်းမသိတာပါဘဲ..
ဂီဂီပြောမှပဲ နားမုဒိန်းကျင့်ခံရမှန်းမသိ ခံရနေတာ သတိရတော့တယ် ။
နေ့စဉ် အဲ့ဒီ အသံတွေနဲ့ ယဉ်ပါးလာတဲ့အခါမှာတော့ ဆူသံ ညံသံမကြားရလျှင်ပဲ မနေတတ် ၊ မထိုင်တတ်သလို ပြောင်းပြန်ကြီးကို ဖြစ်သွားတော့တယ် ။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဆူညံသံအတွက် ဥပဒေ တိတိကျကျထုတ်ထားခြင်း ရှိမရှိတော့မသိဘူး ။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ နီးလျှင်တော့ လော်တွေ မအော်ရ ၊ ကတ်စက် ဘောက်စ်တွေ မဖွင့်ရဆိုတာမျိုး ကြေငြာတာတော့ ကြားမိတယ် ။
လူနေမှု အဆင့်တန်းခြင်းကွာဟတော့လည်း ပတ်ဝန်းကျင် ပုံသဏ္ဍန်ခြင်း ကွဲပြားတာပေါ့လေ ။
ရန်ကုန် မှာတင်မဟုတ်ပါဘူး ကျုပ်တို့လို တောမကျ မြို့မကျ နယ်မြို့တွေမှာကပိုတောင်ဆိုးလှပါတယ်ဗျာ….
လော်စပီကာသံတင်မက ပိုဆိုးတာက ကားဒိန်းဒေါင်းတွေပါ အိမ်ရှေ့ကဖြတ်သွားရင် တဂျိမ်းဂျိမ်းနဲ့ စကားတောင်ပြောလို့မရတော့ဘူး ..
နား တင်မက မီးခိုးတွေက နားခေါင်းပါ မုဒိန်းကျင့်တော့တာဘဲ…ခံစားရတယ်….
ပို့စ်ဖတ်ပြီး မှတ်မိတာလေး ကွန်းမန့်ထဲ ပြန်ရေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ။
ဒီ ဆိုတာ တောင်းယူရမှာ မဟုတ်ဘူး ဆို… ကျင့်ကြံယူကြမှ ရမှာ ဆို….။
စည်းကမ်း ရှိကြမယ် ဆို ဆို …. ဆို ….
ဆူညံသံတွေကို ကျန်တဲ့ အချိန်မှာ ခွင့်လွတ်နိုင်ပေမဲ့
အိပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆူရင်တော့ လူတောင်ထသတ်ချင်အောင် ဒေါသထွက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကင်းအောင်မှ မနေနိုင် လူလဲမသတ်ရဲတော့
aunty tun says:
အန်တီထွန်း တို့ (စမ်းချောင်းလမ်း) မှာတော့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်က ဘောလုံးပွဲရှိတဲ့ညတွေဆို ဆူညံနေတာပဲ ။ မနက်အလုပ်သွားရမယ့်သူတွေ ၊သက်ကြီးရွယ်အို ၊နာမကျန်း ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ၊ ကလေးငယ်တွေ ကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိဘူး ။ ဘောလုံးကွင်းကြီးထဲမှာ အားပေးနေကြသလိုပဲ ။ ဘယ်သူကမှလဲ အရေးတယူ တားဆီးမပေးဘူး ။ တရားဝင် လောင်းကစားဝိုင်းဖွငိ့်ထားသလားမှတ်ရတယ် ။ ကျန်တာတွေတော့သိပ်မပြော တော့ပါဘူး ။
Khaing Khaing says:
ကိုဂီတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီး ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိဘူး ရှုပ်နေတာပဲ ………. တွတ်မလုပ်နဲ့ ဒဲ့ပြော ဒဲ့ပြောဒါမှလည်း အခိုင်တို့လို့ နလပိတ်ဒုံးတွေကနားလည်မှာဗျ ……. ခွေးဝဲစားတွေကလည်း အွန်လိုင်းတက်တယ်နဲ့တူပ ဂိုဏ်းတွေတောင်ဖွဲ့လုိ့စည်းလို့ပါလား …….. ကိုဂီရေ ကိုဂီပြောသလို မသေခင် လုပ်ချင်တာလုပ် ကိုယ်စိုက်တဲ့အပင်ကိုကိုယ်ရိတ်သိမ်းရမယ်ဆိုလားပဲ အတိအကျတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ လော်ဖွင့်တဲ့လူတွေ ခွေးအမဲပြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးက ကိုဂီဆောင်ပုဒ်ကိုလက်ကိုင်ထားလို့ဖြစ်မယ်ဗျ …..
ကိုဂိရဲ့အဆိုကို အပြတ်အသတ်ထောက်ခံပါသည်။ ကျမလည်း နှစ်ရှည်လများစွာထိုဒုက္ခကိုခံစားဖူးသည်ဖြစ်၍ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲထောက်ခံပါသည်။ ကျမနေသည်က တောလဲမက မြို့နဲ့လည်းအလွန်နီးသည့် နေရာလေးဖြစ်သည်။ သာရေး၊နာရေး ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ထိုသာရေး၊နာရေးဖြစ်ခြင်းသည် ၄င်းတို့အတွက် အခွင့်ထူးတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ လော်ကို မိုးထိအောင် ထောင်သည်။ ဆောင်းဘောက်စ်ကို လေးဖက်လေးတန်ထောင်သည်။ မင်္ဂလာဆောင် သာရေးဖြစ်ပါက နေ့ဖက် တနေ့ကုန်ဖွင့်လို့မှ အားမရ ညဘက်တွင် သန်းခေါင်ကျော်သည်ထိ ကာရာအိုကေ သံလေးသံကြောင်ဖြင့် ဟစ်ကြသည်။ တွံတေးသိန်းတန်မှသည် စိုင်းစိုင်းထိ အကုန်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အိပ်နေရာမှထ၍ ခေါင်မိုးကို ခဲဖြင့်ပေါက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိသည်။ ဖွင့်သည့်သူ၊ ဆိုနေသည့်သူကို ဓါးဖြင့် ပြေးထိုးချင်စိတ်ပေါက်မိသည်။ ထို့အပြင်မပြီးသေး မနက်မင်္ဂလာဆွမ်းအတွက် မနက် လေးနာရီမထိုးခင်ကတည်းက ဖွင့်သည်မှာ ဘုန်းကြီးလာမှ ရပ်သည်။ ဘုန်းကြီးတရားပြိးသည်မှ ပြန်ဖွင့်သည်မှာ နေ့တစ်ချက်တီးလည်းမပြိး၊ နှစ်ချက်တိးလည်း မပြီးချေ။ နာရေး ဖြစ်သည်ဆိုပါက အချို့က တနေကုန် တရားခွေဖွင့်ကြသည်။ တရားခွေဖွင့်ပါက မထောင်းသာသေး။ အမေငိုချင်း၊အဖေငိုချင်း(သီချင်းဖြင့်)ဆိုပါက ထွက်ပြေးချင်စိတ်တောင် ပေါက်မိသည်။ ကိုယ်ကအိမ်မှာ ပိတ်ရက်တစ်ရက်ပဲ ရှိသည့်မို့ မထောင်းသာသော်လည်း၊ အိမ်မှာ တနေကုန်ရှိသောသူများအဖို့ မတွေးဝံ့ပေ။ မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်လျှင် မဆောင်မီတစ်ရက်နှင့်ဆောင်နေစဉ်တစ်ရက်ပေါင်းနှစ်ရက်၊ နာရေးဖြစ်သည်ဆိုပါက သွားပေအုံးတော့ တစ်ပတ်လုံး၊ လော်စပီကာဖြင့်အော်ရောင်းသည့်ဈေးသည်က မိနစ်ပိုင်းဖြင့်တိတ်သွားသည်။ ဓမ္မာရုံက ဆိုလျှင် နေ့တစ်ပိုင်းခန့်ဆိုလျှင် တိတ်သွားနိုင်သည်။ ၄င်းသာရေး၊နာရေးများက တော်တော်နှင့် မတိတ်နိုင်ပေ။ ထိုထက်၊ထိုထက် ဆိုးသည်က အလိုက်ကန်းဆိုး မသိသည့် အိမ်နီးနားချင်းများက ဆောင်းဘောက်စ်နှင့်ဖွင့်သည့် အသံများပင်။ ညဘက်လည်း တော်တော်နှင့်မတိတ်၊ နေ့ဖက်လည်း မတိတ်၊ တခါတရံ သဘောကောင်းစွာလာနေသည့် မီးကို ကျိန်ဆဲမိသည်။ ပျက်လိုက်စမ်းပါဟဲ့။ ဟင်… ဒီလိုအချိန်မျိုးကျမပျက်ဘူး။ မီးပျက်သွားသည်ကိုပင်တော်တော်လေး ၀မ်းသာမိသည်။
ထိုဆူညံသံများကိစ္စမထွေးနိုင်၊ မအံနိုင်ဖြစ်နေသည်မှာ ကြာပြီ။ ယခုကိုဂိကျေးဇူးနှင့်သာ စိတ်ကျေနပ်ရသည်။ ဗမာတွေစည်းကမ်းမရှိပါဆိုလျှင် တစ်မျိုးလုံးအသုံးမကျရာ ရှိတော့မည်။ စည်းကမ်းနှင့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသည်ကတော့ တော်တော်ကို ဆိုးပါသည်။
pu ma says:
Air pollution ပဲ လူတွေကြောက်နေကြတာ ,Sound Pollution နဲ့ Light Pollution တွေလည်း ထိန်းသိမ်းသင့်ပါပြီ လို့ Sunday Talk မှာ စာရေးဆရာ ကိုကို နဲ့ မျိုးမြတ်သူတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် ကထိန်ရာသီအမီ ပြောသွားကြပါတယ်။
အဲဒီ အစီအစဉ်အပြီး ကထိန်ရာသီမှာတော့ ရန်ကုန်မှာ လော်သံ မကြားလိုက်ရပါဘူး။
အလှူခံ တရားခွေ ပဋ္ဌာန်းရွတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလည်းပြောချင် ငရဲကြီးမှာလည်းကြောက်တဲ့သူတွေအတွက် လက်ဆောင်ပါ။
ဘုန်းကြီးတို့ မြတ်စွာဘုရားက တိတ်ဆိပ်မှုကို အလွန်လိုလားပါတယ်။သာမညဖလ သုတ္တံမှာ ဇေတ၀န်ကျောင်းထဲက သံဃာတော် တစ်ထောင်မှာ ချောင်းဟန့်သံလေးတောင်မကြားရအောင် တိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်လွန်းလို့ အဇာတသတ်က ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစလို့ ထိတ်လန့်သံသယ ၀င်ရပါတယ်။
အခုကာလ လော်စပီကာတွေ နဲ့ ရပ်ကျော်ရွာကျော် လုပ်ကြတဲ့ အသံမစဲ ပဋ္ဌာန်းပွဲမျိုးကို မြတ်စွာဘုရားသာ သက်တော်ထင်ရှားရှိရင် နှစ်သက်တော်မူမှာမဟုတ်ပေဘူး
ရိပ်သာတွေဆိုရင်လည်း Noble Silence လို့ကို ရေးပေးထားပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက တရားတွေ ဖွင့်နေကြတာ တစ်စွန်းတစ်စ ကြားမိပြီး တရားသံဝေဂ ရသွားသူတွေလည်းရှိနိုင်လေတော့ သူများတွေ လုပ်နေတာတော့ မသင့်ဘူး သွားဝေဖန်ငြင်းခုန် မနေပါနဲ့တော့။
ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပါဝင်ရတဲ့ နေရာတွေမှာ ဒီလို လော်သုံးတဲ့ အပြုအမူတွေ ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ ပညာပေးကြရအောင်ပါ။
မော်လမြိုင် ဖားအောက်တောရမှာ .. Noble Silence ဆိုတဲ့ စာတန်း ကိုနေရာအနှံ့တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ -ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်တွေဟာ လင်းနို့သားဘ၀က တိရိစ္ဆာန်ဘ၀နဲ့ အဘိဓ္ဓမာတရားကို ရိုသေစွာနာယူခဲ့ဘူးလို့အကျိုးများဘူးတယ်လို့မှတ်သားဘူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေသလားတော့မသိပါ ။ ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့ ဒီအသံတွေကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲပြီး နားညီးတယ် စာကျက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်များနေတယ်လို့ထင်တယ် ။ ပါဋိလိုပဲရွတ်နေတော့နားမလည်တာ လည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာရွတ်ဖတ်နေရုံမျှမက နှလုံးသွင်း လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဂိဂိ တယောက် ရန်ကုန် ခဏပြန်လာတာ မုဒိန်း အကျင့်ခံလိုက်ရတယ်လို့ အနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်။
ဆူး တို့ နေတဲ့ခြံ ကို ဘေးခြံက လူတွေ ရောက်လာတယ်။ ပထမဆုံး စပြီး လူမနေခင်မှာ အဲဒီ အိမ်က ခွေးခပ်ငယ်ငယ်လေး တယောက် ခေါ်လာပြီး အိမ်ထဲမှာ လုပ်ထားတဲ့ လှောင်အိမ်ထဲမှာ ခွေးကို ထားပြီး ထွက်သွားတယ်။ ခွေးခမျှာ ကြောက်လွန်းလို့ တညလုံး အော်ဟစ်နေတာ သူများခြံထဲ ၀င်ပြီးတော့ ဖွင့်ပေးရင်လည်း မကောင်း.. ခွေးကလေး အသံ နားဆူ တယ်လို့ ခံစားရပြီး နောက်ပိုင်းတော့ ခွေးအသံ နားဆူတယ်လို့ ခံစားရတာထက် ခွေးကလေး သနားစိတ်ပိုမိတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ နောက်တနေ့ အိမ်ရှင်ကလာတော့ ခွေးကလေး ကို လာခေါ်သွားတယ်။ ခွေးကလေးလည်း စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ ပြန်လိုက်သွားတယ်။ အဲဒါ ဆူး တို့ အိမ် အတွက် ပထမဆုံး သင်ခန်းစာမှန်း နောက်မှ သိလိုက်ရတယ်။
နောက်ပိုင်း အဲဒီ မိသားစု ပြောင်းနေကြတယ်။ ခြံထဲမှာ တိရိစ္ဆာန်ရုံလို့ ပြောလို့ ရအောင် အကောင် ဗလောင် မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ငှက် ဆိုလျှင်လည်း ကတ္တ၀ါ ကြက်တူရွေး နောက် ဘာအမျိုးမှန်း သမိတဲ့ ငှက်ကလေးတွေ သြဇီ ကြက်တူရွေး အဆိုးဆုံးပါပဲ အသံ သိပ်ပြဲ ပါတယ်။ နောက် အိမ်ပတ်လည် ခြံကို အမိုးမိုးပြိး စင်တွေ အဆင့်လုပ်ပြီး မှန်ပုံးထွေ ထားပြီး ငါးမွေးထားပါတယ်။ အဘိုးကြီးက အကောင်လေးတွေ မွေးရတာ စိတ်ချမ်းသာလို့ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ စိတ်အပန်းပြေတယ်ဆိုပြီး မွေးထားတာပါ။ ခွေးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒေါင်းမြီးလို ထောင်တဲ့ ကြက်ပိစိလေးတွေ နာမည်မေ့နေလို့ အဲဒီ အကောင်တွေလည်း ခြံထဲမှာ လျှောက်သွားနေကြတယ်။ ခြံခြင်းကပ်လျှက် ဖြစ်နေတဲ့ အပြင် အဖိုးကြီးက အပြင်ထွက်တာနဲ့ မီးခိုးခေါင်းတိုင်လို မီးခိုး တအူအူ ထွက်အောင် ဆေးလိပ်သောက်ပါတယ်။
အဲဒီ အိမ်က မနက်ဆိုလျှင် လူကြီးတွေ အကုန် အပြင်ထွက်ကြတယ် ပွဲရုံကို သွားကြတယ်။ အိမ်ဖော် ကောင်မလေး တယောက်တည်း ကျန်ပါတယ်။ သြဇီ ကြက်တူရွေး ကြီးတွေက စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို အသံပြဲကြီးနဲ့ ဗြဲ ဗြဲ နဲ့ အော် တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ အဖေက ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းလို့ အိပ်ယာထဲ လဲ နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်နေပါပြီ။ အိမ်ကို ခဏတဖြုတ် လာလည်တဲ့ လူတွေက ဘာသံမှန်း မသိပဲ စူးစူးဝါးဝါး အသံကို ရုတ်တရက် ကြားရင် လူမမာ ရှိလို့ ငှက်စိုးထိုးတာလား ဆိုပြီး မေးကြတယ်။ အမှန်တော့ ဘေးအိမ်က ငှက်ကြီးက အော်တာပါ။ အဲဒီ ငှက်ကြီး အော်ရင် ပတ်ဝန်းကျင် ဘေး ၃အိမ် အားလုံး ၆အိမ်လောက်က နားမခံနိုင်လောက်အောင် ဆူလို့ စိတ်ညစ်ကြပါတယ်။ အဆိုးဆိုးကတော့ ဆူး တို့ အိမ်က ကပ်လျက် ဖြစ်နေတော့ ပိုပြီးသည်းခံရတယ်။ အိမ်ရှင်ကားလာပြီဆိုလျှင် အားရပါးရ အော်ဟစ်နေတဲ့ ခွေးတွေကလည်း တကောင်တည်း မဟုတ်ပါဘူး ၃ ၄ ကောင်လောက် အော်နေကြပါတယ်။
ငှက်လှောင်အိမ်တွေ ရှိတော့ ငှက်အစာတွေ ကျွေးရင်း အစာတွေ လှောင်အိမ်အောက်ကို ကျတဲ့ အခါ ခိုတွေကလည်း အစာပေါတော့ လာကြပါတယ်။ ခိုတွေက ပတ်ဝန်းကျင် အိမ်တွေက တံခါးဘောင်တန်းတွေမှာ ခိုနားနေကြပါတယ်။ ခိုတွေ ရှိတော့ ခိုချေးတွေ အရမ်းကို ညစ်ပတ်ပါတယ်။
ရပ်ကွက်ရဲ့ မေတ္တာကို ခံယူထားပြီး နေကြတာ အဖေ နေမကောင်း မဖြစ်ခင်ကတည်းက အဖေ ဆုံး ပြီးလို့ ၃နှစ်လောက်နေတဲ့ အထိ သူတို့ နေကြပါတယ်။ အဲဒီ အိမ်ကို အခုတော့ အိမ်ရှင် အသစ်ရောက်လာပြီး အိမ်ယာဝင်းကြီး တော်တော် တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။ အိမ်ရှင်အသစ်တွေက အိမ်တက် ဖိတ်တော့ လာစားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ဒီအိမ်က ရာဇ၀င် ဆိုးတဲ့ ဘိုးတော်ကြီးနေခဲ့တဲ့ အိမ်မို့ ခွေးအိမ် လို့ ခေါ်တယ် ပြောလို့ သူတို့ ခမျှာ ခွေးမရှိပဲ ခွေးအိမ် တက်နေရသလို ဖြစ်နေလို့ မချိပြုံးနဲ့ ပြုံးပြီး စားပါခင်ပါ ပြောကြတယ်။
ရီစရာတော့ ကောင်းပေမဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ အဲဒီ အိမ်မှာ နေသွားတဲ့ ဘိုးတော်ကြီး မိသားစုက ပေးတဲ့ ဆူညံသံကို ရပ်ကွက်က လူတွေကလည်း မပြောကြဘူး။ နားငြီးလည်း သည်းခံကြတယ်။ အစာတွေ ဟိုကျ ဒီကျ နဲ့ ခိုတွေ လာပြီး အိမ်တွေ ညစ်ပတ်အောင် လုပ်လည်း သိပ်မပြောကြပဲ သည်းခံ ကြတယ်။ အခုတွေးတော့လည်း တော်တော် ရီစရာ ကောင်းသလိုပဲ။ အိမ်က လူတွေနဲ့ နေမကောင်းတဲ့ လူလည်း နားအကျင့်တောတော ရခဲ့တယ်။ ဘာမှ လုပ်လို့ မရလို့ ဆိုပြီး စိတ်လျော့ပြီး သည်းခံရင်း အကျင့်ရသွားတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ရပ်ကွက်က လူတွေက ဘာမှ မလုပ်တာ သက်သက် အမုန်းမခံတော့ပဲ သည်းခံလိုက်ကြတာလည်း ပါတယ်။ ပြောပြချင်တာကတော့ ဒီဘ၀ မှာ ဒီလို နေရတာ ရိုးအီခဲ့ပါပြီလို့ပါပဲ။ ဆူညံသံတွေ ကြားလို့ လူက ထုံထိုင်းသွားမယ် မထင်နဲ့နော်.. လူမမာ ည စောင့်ခဲ့လို့ အိပ်ပျော်နေခဲ့လျှင်တောင်မှ ဘေးက အသံ ခပ်တိုးတိုးကြားရင် နိုးပါတယ်။
kai on ဝါးများကို ခြောက်ပြန်ဆက်ပြီး တည်ထားသောဘုရား
kai on တွေးမိတာလေး ရေးပါရစေ
Shar Thet Man on ဝါးများကို ခြောက်ပြန်ဆက်ပြီး တည်ထားသောဘုရား
ksein on ဝါးများကို ခြောက်ပြန်ဆက်ပြီး တည်ထားသောဘုရား
kai on အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈
Shar Thet Man on အလ္လာACATပါ
ဦးကြောင်ကြီး on တွေးမိတာလေး ရေးပါရစေ
Shar Thet Man (66260 Kyats )